किराँत समुदाय उभौली मनाउँदै, के हुन् त बुद्धका आठ मार्ग ? « Nepal Bahas
किराँत समुदाय उभौली मनाउँदै, के हुन् त बुद्धका आठ मार्ग ?
प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०८:२१
काठमाडौं । आज किराँत समुदायको उभौली चार्ड हर्षउल्लासका साथ मनाइँदै छ । यस्तै सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीहरूमध्ये केहीले यसै दिन देवाली, गोठधुप पनि गर्दै आएका छन् । वैशाख शुक्ल पूर्णिमा सेरोफेरोमा काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न जात्रा चल्ने गर्छन्।
आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी २५६३ औँ बुद्ध जयन्ती मनाइँदैछ। गौतम बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण प्राप्ति भएको त्रिसंयोग परेको दिनको रूपमा यसको महत्त्व छ।
हालको लुम्बिनी क्षेत्रमा इसापूर्व ५६३ अर्थात् करिब दुई हजार ६०० वर्षअघि राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको सुपुत्रका रूपमा जन्मेका थिए। सुरुमा उनको नाम सिद्धार्थ राखिएको थियो। उनी २९ वर्षका उमेरमा दरबार त्यागी ज्ञानको खोजीमा लागेका थिए। ५ वर्षको तपस्यापछि ३५ वर्षको उमेरमा इसापूर्व ५२८ मा सिद्धार्थलाई भारतको बौद्धगयामा बुद्धत्व प्राप्ति भयो। यसपछि उनले बुद्धका रूपमा विश्वभर प्रसिद्धि पाए।
गौतम बुद्धले बताएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा
सम्यक् स्मृति र
सम्यक् समाधि प्रज्ञा, शील र समाधि पर्छन्।
यौन व्यभिचार नगर्नु,
मद्यपान नगर्नु र
हिंसा नगर्नु रहेका छन्।
बुद्धलाई शान्तिका अग्रदूत, एसियाका ज्योतिलगायत उपमा दिने गरिएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँको बौद्ध, स्वयम्भू, चारुमती विहार, लुम्बिनी, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धलगायत स्थानका बौद्ध बिहार, गुम्बा, स्तूप, चैत्यमा बुद्धवाणीसम्बन्धी प्रवचन, शोभायात्रा र शान्ति पदयात्रा निकालिँदै छ।